Hiran State - News: HS:-Qaban qaabada doorashada m/weynimada Soomaaliya oo
HS:-Qaban qaabada doorashada m/weynimada Soomaaliya oo
HS:-Magaalada Mogdishu oo ah goobta lagu wado iney ka dhacdo doorashada m/weynimada Soomaaliya bishani aynu ku jirno aaqirkeeda, waxaa ka socda qaban qaaabo xoogan kadib markii ay dhawaan ku dhawaaqeen qaabka ay u dhaceyso doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa siweyn looga dareemaya dal iyo dibad qaban qaabada arintaas hadey noqon laheyd musharaxiinta iyo baarlamankaba.
Inta badan musharaxiintii ugu cusleyd ayaa lagu soo waramayaa iney galayaan doorashada dhaceysa bishan aaqirkeeda waxaana lagu soo waramayaa in ayba qaarkood ku sugan yahiin magaalooyinka Nairobi iyo Mogdishu halka ay kuwo kalena ka amba baxayaan wadamada Yurub, waqooyiga America iyo bariga dhexe.
Marka doorashada dhaceysa laga soo tago waxaa iyadana lagu soo waramayaa in ay doorashada ka qeyb galayaan qaar ka mid ah masuuliyiinta dowlada oo iyagu aad u dareensan inuusan meel mar noqon karin qorshahii Roadmapka iyo dastuur u sameynta dalka, waxaana masuuliyiintaas ka mid ah r/wasaaraha iyo gudoomiyahii hore ee baarlamaanka oo iyagu tanaasul ka muujinaya fikirkoodii hore.
Madaxweyne Shariif naftiisa ayaa lagu soo waramayaa inuu dabacsanaan ka muujinayo fikirkiisii hore kadib markii uu waji gabax kala kulmay kulan uu la qaatay beesha Direed maalin hore si uu uga dhaadhiciyo arimaha roadmapka iyo dastuur u sameynta dalka waxana loogu jawaabay in aysan beeshu shaqo kulaheyn wax aysan ogeyn meeshii lagu dhisay,waxaa kale oo Shiikh Shariif aad uga yaabiyey kadib markii uu beeshu u hadlay hal qof intii kalena yiraahdeen wax fikirka qofkaas ka duwan kuuma heyno.
Sidoo kale beelo kale oo Soomaaliyeed ayaa diiday ineyba la kulmaan Shiikh Shariif iyagoo ka baqay in lagu bartilmaameedsado goobta uu shirku ka dhacayo waxaana Shariifka u sahlanaatay inuu la kulmo beelaha shanaad oo uu arintii kala hadlay walow aan la helin jawaab sax ah oo ay siiyeen Shiikh Shariif maadama aysan u habeysneyn sida la sheegay qaabkii ay u habeysnaayeen beesha Direed xiligii ay la kulmayeen Shariifka.
Dhinaca kale waxaa guud ahaan meel mar noqon waayey qorshahii dastuur u sameynta dalka taasi oo ay diidmo kala horyimaaden dhamaan beelahii Soomaaliyeed ee aan lagu casuumin shirarkii Garoowe 1 iyo 2 hadal heynta dastuurkaasina waxaa hada ka soo soka maray oo aad dal iyo dibad looga hadal hayaa doorashada soo socota ee lagu wado iney dhacdo 30-ka April.
Amaanka madasha uu shirka ka dhacayo ayaa lagu wadaa inta ay doorashadu socoto in ay la wareegi doonaan ciidamo aan Soomaali aheyn, arintaas oo hada qorshaheeda ay beesha caalamka kala hadleyso gudga qaban qabada doorashada iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Madoobe Nuunoow Mohamed, si loo xaqiijiyo nabadgalyada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u tartameysa xilka ugu sareeya dalka.
Beesha caalamka oo iyadu horey u qorsheyneysay in la qabto doorashada ka hor bisha 8aad ayaa hada siweyn u taageersan doorashada xiligeeda laga soo hormariyey ee dhaceysa bishan aynu ku jirno aaqirkeeda kadib waxii ka danbeyey qaraxii lagu qaarajin rabay r/wasaare Gaas ee ka dhacay tiyaatarka qaranka.
Sidoo kale waxaa arinta sii xoojiyey Mahiga iyo Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Hasan oo laga dareemayo isbedelo xoogan oo ka duwan midii hore kadib cadaadis kaka yimid beesha caalamka, waxaana lagu soo waramayaa in Shariif Hasan uu heshiisyo hoose iyo sameynta xulufo cusub ku mashquulsan yahay inkasta oo aanu dooneyn in aanu arintaas ka hor dhacno hada maadaama ay bilaaw tahay.
Dadka siyaasada Soomaaliya saadaaliya ayaa sheegaya in Shiikh Shariif iyo xertiisa Allaa Shiikh wado kasta oo ay u maraanba iney kaka taqalusin doonaan doorashada ka hor r/wasare Gaas iyagoo u mari doona 3 arimood midkood 1- In shirqool lagu dilo.2- In la sumeeyo iyadoo la isticmaalayo xaga cuntada la cuno maadama cuntada laga cuno Villada halmeel laga keeno.3- In qorshe hada fashilmay oo ahaa in xilka laga qaado doorashada ka hor la soo nooleeyo.
Ugu danbeyn dalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid yeelanaya madaxweyne Cusub marka la eego sida ay siyaasadii guud ee Soomaaliya isku bedeshay bilahii ugu danbeyey siiba qaraxii lala beegsaday r/wasaaraha iyo wasiiro u badan kuwo isaga taageersan.
· admin on April 09 2012 13:51:31 · 0 Comments · 1821 Reads ·
14,568,300 unique visits